Living Trust vs.Chidimbu chekuronga dzimba uye Dziviriro Yezve Asset
A Living Trust igwaro rine mapato matatu makuru:
Anogadzirisa ane kuvimba kwakasimbiswa.
Mutrasti, uyo anotarisira trust.
Ivo vanobatsirwa avo vanobatsirwa nekutendeseka.
Kana ichisanganisira vakaroorana, trust trust inowanzo taura kuti trust zvinhu zvinobva zvaenda kune asara mumwe, uyezve kuvana vavo kana vaviri vapfuura. Kune makuru masitendi, kune maA / B Matrust apo Trust A inoendesa hafu yemidziyo kuti iende kune akasara mukadzi. Iyo imwe hafu inopinda muB trust uye mumwe aripo anowana mari yekudyara kubva kuB trust. Kana vese vafa, Trust A uye Trust B inoendesa kune vadyi venhaka, zvakapetwa iyo mari inogona kutamisirwa mutero wepamba pasina.
Chii chinonzi Kuda?
Chido, chinowanzonzi "wiri yekupedzisira netestamente," chine gwaro paunonyora zvaunoda kuti zviitike kune yako pfuma, pamwe nezvimwe zvido, mushure mekufa. Mumwe munhu anoverenga kuda kwako mudare redare mushure mekufa kwako. Dare, zvakare, rinopihwa basa rekuona kuti zvido zvako zvaitwa mukati memiganhu yemutemo.
Pamusoro pekutaura zvaunoda kuita neako chivakwa, iyo zvakare inowanzo ine zvinhu zvinotevera:
Zita remuiti anozoshanda nematare kuti aite kuda.
Inogona kutumidza vachengeti vevana vadiki.
Mirayiridzo yekubhadhara chikwereti nemitero yemitero.
Unogona kuita sekuwedzera kune kuvimba kwetariro
Kusiyana netrust mhenyu, zvinowanzo kutora nguva kuita
Inofanirwa kugadziriswa kuburikidza nedare redzimhosva
Nguva inopedza uye inodhura mari yeprateate uye mutengo wedare
Mutongi anofanira kuzvibvumidza
Heano maitiro aunofanirwa kwete shandisa kuda:
Kuratidzira mamiriro pane inoendeswa imba (Fred anofanirwa kuwana degree reu doctorate asati agamuchira account yangu yekuchengetedza)
Mirayiridzo yegadziriro yemariro
Kusiya zvinhu kumhuka dzinovaraidza
Kuita zvirongwa zvinopesana nemutemo
Zvitatu Zvikuru Kurarama Trust Zvibatsiro
Sarudza ndiyo nzira yepamutemo yekugovera zvivakwa kubva kune uyo akafa kune vamwe. Panguva yekuita izvi, matare anogovera zvivakwa zvekugadzirisa zvivakwa. Kazhinji kazhinji, kune mari yemagweta pamwe nemari dzematare dzinosanganisirwa nekutora wiri kuburikidza nekuferefeta. Pamusoro pezvo, avo vari kuzogashira mari yewill havagone kuwana izvo zviripo nekukasika; kutozosvikira dare rekuongorora ratambira mvumo yekuparadzira. Maitiro aya anogona kusunga mari kubva kumwedzi mishoma kusvika kumakore akati wandei.
Kana vadyi venhaka vako vauya nechido chako kubhangi rako uye voedza kutora mari mushure mekufa kwako bhanga harivabvumidze kubata mari. Dare rekuongorora rinofanira kupa mvumo kubhangi. Nedhipatimendi rekugara rakanyatso nyorwa, kune rumwe rutivi, inyaya yakasiyana. Avo vaunotumidza zita mutrust vanowanzoenda kubhangi, vauye nekopi yetrust yako pamwe nekuzivikanwa kwavo uye gwaro rako rerufu. Ipapo ivo vanogona kubvisa mari nekukasira maererano nechibvumirano chetrust.
Kudzivirirwa kwematare kunogona kupihwa kune vanhu vakaroora kana zvinhu zvachengetwa pakati pematirastii maviri. Assets mukutarisirwa kwakanyatso nyorwa kwemukadzi inogona kuvharirwa kubva kuzviito zvemurume, semuenzaniso.
Kuchengetedza imba yako
Iwe unogona kuviga zvese kana chikamu chakakura chenzvimbo yako kana iwe waenderana nezvikamu 2056 uye 2041 yeiyo IRS kodhi yemutero.
Kuva nepfuma kana mari mukutenda kwako kunodzoserwa hakurevi kuti iwe uchinje yako federal mutero kufaira. Izvo zvakafanana newe wakapfeka ngowani yakatsvuka. Iwe unongoteedzera yako mitero nenzira imwecheteyo yawakaita usati wavimba newe.
Sezvambotaurwa pamusoro, trust trust inodzivirira iyo inodhura uye inotora nguva probate maitiro. Nechivimbiso chipenyu, kana vanogarika vafa kana vagari vacho vafa, vanobatsirwa vanogona kugamuchira zvinhu zvekuvimba vasina kutora matare nemagweta kuti vabatanidzwe mukuita uku. Izvi zvinoponesa nguva nemari; pamwe mari yakawanda.
Dzimwe nyika dzinobhadharisa akakosha masheate esu, inova chikamu cheiyo yakazara kukosha kweiyo imba. Hezvino izvo zvinoreva. Semuenzaniso, ngatitii nyika inobhadharisa mari yeproteate yezvikamu zviviri muzana (2%) yeiyo gross estate. Iwe unogara nhaka imba inosvika mamirioni maviri emadhora. Ngatifungei kuti imba, neimwe nzira, ine $ 2 miriyoni mogeji yakanyorwa pamusoro payo. Nekudaro, kune zero zero kuenzana. Nekudaro, matare anokwanisa kuunganidza maviri muzana emutengo wakakomba weiyo pfuma, kana madhora makumi mana emazana pamubhadharo weprate pamba iyo zero equity. Dai imba yacho yanga iri mutrust mhenyu, iwe (kana vadyi venhaka yako) ungadai wakaponesa makumi mana makuru.
Kana mumwe munhu akakwikwidza kuda, mari yegweta inogona kunge ichishamisa. Zvinoshamisa kuti kangani idzo hondo dzenhaka dzinogona kushandura hama dzine rudo kuva vavengi vanofa. Isu takaona hondo dzepfuma dzakapinda mumamirioni emadhora uye dzave zvinodhaka kuburikidza nematare kwemakumi emakore.
Muchidimbu, kubva pane zvakaitika, takaona kuti matirastii ehupenyu anoshandira vatengi vedu zvakanyanya zvirinani kupfuura zvido sechinhu chikuru chekuronga dzimba. Iyo inovachengetera ivo vanoshamisa misoro, nguva, uye hongu, mari. Nekudaro, isu tinowanzo seta yekutendeka kuvimba sechiridzwa chikuru. Ipapo isu tinoseta wiri semuchina wekuwedzera kune izvo zvinhu izvo zvisina kuziviswa zvisina kuiswa mutrust.
Maitiro Ekuisa Zvivakwa MuChinhu Chipenyu
Iwe unoshandura zita racho kuva chivakwa. Semuenzaniso unoenda kubhangi rako wonounza gwaro rako rekuvimba. Iwe unobva wakumbira mubhangi kuti aendese maakaundi ako mukutenda kwako. Kune chaicho chivakwa, iwe unogona kuzadza yakapusa "kurega kutora gwaro" uye wochinjisa yako chaiyo zvivakwa kubva kuzita rako kune yako trust Kazhinji, vanhu vanoshandisa rumwe rudzi rwekuvimba isu tese a land trust kuva nezvivakwa.
Iwe unonyora chivakwa pane "purogiramu 'A.'”Chirongwa" A "chidimbu chepepa chinowanzo kuve chakanamirwa kumashure kwesimba rako. Iyo inongotsanangudza iyo chivakwa iyo iwe yaungade kuve yaisanganisira mune yako trust. Semuenzaniso, "Iyo brown china kabhineti" kana "Iyo tsvuku antique wachi kubva kuGerman" kana "My Hewlett Packard purinda modhi # JJ54436." Nguva imwe neimwe paunoshandura chirongwa chako "A" zvakanakisa kuti uve nacho zvakare notarized. Vanhu vazhinji vanogadziridza yavo "A's" kamwe pagore kana pavanotenga zvinhu zvinodhura.
Kazhinji zvinonyanya kuita zvese zviri pamusoro kana zvichikwanisika. Semuenzaniso, bvunza mubhangi wako kuti achinje zita kuakaundi yako kubhengi muzita rekuvimba kwako. Pamusoro pezvo, unogona kunyora “Bank of America account # 00533-01242” pane yako purogiramu "A." Izvi zvinowedzera kubatsira kutungamira vadyi venhaka yako kumabhangi ako akasiyana uye maakaundi ekudyara.
Zvinodzoreka Kurarama Chivimbo
Iwe unogona kugadzirisa yako inodzoserwa kurarama kuvimba chero nguva. Unogona kuve mutirastii. Mutirastii ndiye anotarisira trust uye akabata zita repamutemo kune iyo chivakwa mutrust kuti ibatsirike yemumwe munhu - kana iye amene. Matirastii anodikanwa zvakare kuti atevere mafambiro akarondedzerwa mugwaro rekutendeka. Ndokunge, iwe unogona kudzora kuvimba kwako. Unogona kushandura vanobatsirwa kakawanda sezvaunoda. (Vanobatsirwa ndevaya vanogamuchira mari yawakavimbiswa — kazhinji paunofa.) Kana uchida, unogona kuva nemumwe munhu kana kambani inoita mutirastii. Per gwaro rekuvimba, ivo vanowanzoita mabasa pasi pekutungamira kwako. Iwe unogona zvakare kushandura kuti iye mutirastii ndiani chero nguva. Unogona kuisa mari kana chivakwa mutrust yako kana kuzvitora kubva mutrust yako.
Vazhinji vanhu vane real estate Holdings vanotora chivakwa chimwe nechimwe muzita kuvimba kwakasiyana. Ipapo ivo vane kambani inopa masevhisi emabatirastii anomira mukati semutirastii. Iyo trust ine zita risingabatanidzwe neiye uyo aive netrust yakaiswa. Semuenzaniso, Makambani Akaverengerwa Trust # 24775. Saka, kana paine chero munhu akatsvaga zita muzvinyorwa zveveruzhinji, zita remunhu uyo ​​ane mubereko unobatsira muchivako harionekwe.
Dziviriro Yezve Asset uye Kuronga Kwezvivakwa
Kuva neyako chivakwa chinodzoserwa chivimbo hakukupe imwezve chaiyo kudzivirirwa kwematare pane kuva neyako chivakwa muzita rako wega. Ndicho chikonzero nei vazhinji vachishandisa iyo trust trust yakabatana pamwe neasset dziviriro mudziyo. Vanhu vazhinji vanobata zita kune avo vashoma kudyidzana kana ma LLC mune yavo kuvimba. Semuenzaniso, vabereki vanobata yavo 15% yehukama hwekudyidzana kufarira mukutenda kwavo. Ipapo vana vavo vanogovana 85% yasara yemubatanidzwa.
Chivimbo chipenyu hachipe dziviriro yeaseti kubva kumatare edzimhosva. Kubatana kwakarongeka kwakaringana kana LLC inogona (ona pamusoro). Zvino, kana iwe uchinge wafa, yako yakawandisa kudyidzana / manejimendi kufarira inokwanisa kuenda kune avo vaunodoma, sevana vako. Uye zvinoita saizvozvo pasina kuenda kuburikidza inodhura uye inotora nguva probate maitiro.
Isu tinokurudzira zvikuru kuti iwe uongorore matrust ese zvakadzama neane ruzivo-rwekuronga dzimba. Ita saizvozvo usati waishandisa mune yako imba uye / kana hurongwa hwemari. Mitemo inosiyana uye inochinja nguva nenguva uye zvaunoda zvinogona kusiyana. Unogona kushandisa manhamba uye fomu yekubvunza pane ino peji kune rumwe ruzivo.
Yakapedzisira Yadzikwa panaJune 12, 2019